"Ilaa Yaraantaydii Ayaan Ku Riyoonayey Ku Guuleysiga Ballon D'Or" - Laacib
“Ilaa Yaraantaydii Ayaan Ku Riyoonayey Ku Guuleysiga Ballon d’Or”
Karim Benzema ayaa sii wata bandhigga wanaagsan iyo wacdaraha uu ka muujinayo garoomada, isaga ka mid noqday murashaxiinta abaal-marinta Ballon d’Or ee sannadkan 2021, taas oo u ahayd riyadiisa illaa yaraantii.
Xiddiga reer France ayaa ahaa xiddiga ugu muhiimsan iyo gool-dhaliyaha Real Madrid ee labadii sannadood ee ugu dambeeyey, waxaanay taasi keentay in dib loogu soo celiyo xulka qaranka dalkiisa oo uu tababare Didier Deschamps ka adkaysan kari waayey iyadoo aanu wali dhinac u dhicin kiiskii fadeexadda ee Valbuena ee hore loogaga caydhiyey sannadkii 2015.
Tartankii UEFA Nations League ee Axaddii lasoo gabogabeeyey ayuu Benzema ka caawiyey xulkiisa inay ku guuleystaan, isagoo dhaliyey min hal gool labadii ciyaarood ee finalka iyo Semi-finalka, isla markaana ahaa xidhiidhiyaha iyo niyadda ugu weyn ee ay ciyaartoydu haysteen.
Waraysi uu siiyey telefishanka TVE ayaa waxa uu ku sheegay in abaal-marinta Ballon d’Or oo uu ku guuleysto ay tahay riyadiisa illaa yaraantii, waxaanu yidhi: “Waa abaal-marin ay dhamaan ciyaartoydu doonayaan inay ku guuleystaan.
“Illaa yaraantaydii, waxa aan ku fikirayay inaan ku guuleysto abaal-marintaas. Haddii aan si uun ugu dhowaado, sababtu waa ciyaartoyda kooxdayda.”
Karim Benzema waxa kale oo uu ka hadlay mustaqbalka Kylian Mbappe oo uu tibaaxay inuu rajaynayo inuu rajaynayo inay Real Madrid u wada ciyaaraan mustaqbalka dhow, iyadoo laacibkan uu qandaraaskiisa PSG ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan socda.
“Waan ku raaxaystaa in aanu xulka qaranka iska garab ciyaarno. Mustaqbalkana, maxaa diidaya [in Real Madrid aanu u wada ciyaarno]? Waa ciyaartoy wanaagsan laakiin waa in aad ixtiraamto PSG. Anigu mar walba sidaas ayaan idhaahdaa, waanan odhan doonaa, waxaanse rajaynayaa in aanu maalin uun iska garab ciyaaro doono [Real Madrid].”
Benzema oo seegay koobkii Adduunka 2018 ee uu waddankiisu ku guuleystay, waxa uu toddobaadkan la qaaday koobkiisii ugu horreeyey ee intii uu xidhnaa shaadhka xulka France, waxaanu ku tilmaamay farxad ka maqnayd oo uu helay.
Isaga oo ka hadlaya waxa uu yidhi: “Qiimo badan ayay iigu fadhidaa, aad ayaan ugu faraxsanahay shaqada aan qabtay kaddib shan sannadood oo aan ka maqnaa xulka qaranka.
“Waxay ahayd waddo adag jidh ahaan iyo maskax ahaanba. Waxa aanse rajaynayaa inaan sii wadi doono ku guuleysiga koobabka [xulka qaranka].”